Faah Faahin:Weerar Gaadiid Badan looga Qabsaday ciidanka DF-ka oo ka dhacay Xerada Laanta-Buuro ee duleedka Muqdisho.
Monday July 11, 2016 - 06:26:42 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya gobolka shabeelaha Hoose in weerar khasaara badan dhaliyay lagu qaaday saldhig melleteri oo ciidanka dowladda Federaalka ay ku leeyihiin duleedka degmada Afgooye.
Gaadiid dagaal oo DF-ka looga qabsaday weerarkii Laanta Buuro 21,March,2016
Xalay saqdii dhexe ayay ciidamo aad u hubeysan oo katirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxay weerar xooggan ku qaadeen xerada Laanta-Buuro oo talis weyn u aheyd melleteriga DF-ka.
Dagaalka oo bilaawday abaara 1:00 Habeenimo ee xalay ayaa lagu daah furay weerar istish-haadi ah oo uu fuliyay mid kamida ciidamada Xarakada Al Shabaab kadibna waxaa xigay dagaal fool ka fool ah.
War rasmi ah oo saaka kasoo baxay Al Shabaab ayaa lagu faah faafiyay howgalkii Laanta Buuro iyo khasaaraha kasoo gaaray ciidanka Dowladda Federaalka sida ay baahisay Idaacadda Islaamiga Andalus.
Taliska ciidanka Al Shabaab ayaa xaqiijiyay in ciidankooda gaarka ah ay si buuxda ula wareegeen gacan ku heynta xerada Melleteriga Laanta-Buuro iyo dhammaan wixii saanad melleteri ahaa ee yiillay.
"Mujaahidiintu waxay weerar xooggan oo ay ku qaadeen Xerada Laanta-Buuro ku qabsadeen 7 gaari isugu jiro kuwa dagaal iyo kuwa raaxada ah sedax kalane waa ku gubeen, allaah fadligiis waa la wareegeen xerada iyo wixii hub ah ee dhax yiillay” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Al Shabaab.
Khasaaraha dhimashada ee gaaray ciidanka DF-ka ayaa la sheegay in ay ka badanyihiin 30 askari iyo burbur xooggan oo soo gaaray xerada Laanta-Buuro.
Ilo wareedyo madax banaan ayaa xaqiijinaya in Gaadiidka ay qabsadeen ciidamada Al Shabaab 4 kamida ay yihiin kuwa dagaalka oo qaarkood aysan xabaddu Karin islamarkaana ay saaranyihiin hub culus sidoo kale 3 gaari oo isugu jira kuwa ciidanka Xambaara iyo booyado ayaa lagu gubay dagaalka.
Waa marki 2-aad oo Xerada Laanta-Buuro ay weerar xooggan kala kulanto XSHM, 21,March,2016 ayay aheyd markii Ciidamada Al Shabaab ay sidaan oo kale ula wareegeen Xerada iyagoo halkaasi ka qaatay 9 gaari oo nuuca dagaalka ah.